Richard's Desktops yemahara kwenguva shoma | Ndinobva mac
Isu tinodzokera kumutoro nechikumbiro chatinogona kurodha pasi kwenguva shoma zvachose mahara. Iyo application yatiri kutaura nezvayo nhasi inotibvumidza isu kuseta akasiyana mapikicha kana isu takaguta nemari iyo OS X inotitorera mune yega yega vhezheni kana isu tatova nekushayikwa kwetsika mazano. Richard's Desktops inotipa muunganidzwa weakakwira resolution mapuraneti eMac yedu. Aya ese mamiriro ekumashure ari kubva kumutori wemifananidzo Richard Seldomridge uye inosanganisira mazana matatu nemakumi matatu nematanhatu emadziro akasiyana ezvose zvavanofarira. Pakati pemifananidzo yatinowana tinogona kuwana mifananidzo yemakomo eColorado, Grand Canyon, Yellostone pamwe nenzvimbo dzakasiyana siyana, zviitiko zvemhuka dzesango, mwaka wakasiyana wegore uye nezvimwe zvakawanda.
Chokwadi, pakati pemapuraneti mazana matatu nemakumi matatu neshanu, imwe yezuva regore, isu tichawana anopfuura imwe chete uye maviri anoenderana nezvatinoda. Mifananidzo yose inowanikwa mukugadziriswa kukuru uye Iwo anoenderana nevatariri vane 4k uye 5k resolution. Ichi chishandiso hachina chero mhando yekushambadzira kana mamaki pamifananidzo. Mifananidzo yese inosanganisirwa mukushandisa, saka huremu hwayo hunenge maigigabytes maviri. Izvo chete asi zvatinogona kuwana mune ino application ndeyekuti saver saizi haishande, asi zvikasadaro iko kushanda kwakanakisa kunakidzwa nemufananidzo mutsva pane yedu Mac mazuva ese.
Iri svondo Iine mutengo wenguva dzose muMac App Store ye0,99 euros, asi kwenguva yakati rebei tinogona kuikanda zvachose mahara kuburikidza neiyi link yandinosiya panopera chinyorwa ichi.
Richard's Desktop ruzivo
Kugadziridza kwekupedzisira: 05-01-2016
Saizi: 1,92 GB
Kugarisana: OS X 10.10 kana gare gare, 64-bit processor.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Richard's Desktops yemahara kwenguva pfupi
Apple inovhura nyowani yekuvandudza nzvimbo mu "Chinese Silicon Valley"